Paul Scholes oo digniin adag u diray Solskjaer kahor kulanka Liverpool – Gool FM
(Manchester) 22 Okt 2021. Halyeeyga kooxda Manchester United ee Paul Scholes ayaa digniin adag u diray tababare Ole Gunnar Solskjær kahor kulanka Premier League oo ay Axada la ciyaarayaan Liverpool.
Paul Scholes ayaa aaminsan in qaab ciyaareedkii ay ku soo bandhigtay kooxda kulankii Atalanta ee Champions League uusan ku filneen kahor kulanka derby-ga oo ay Reds kula ciyaari doonaan Old Trafford.
Wargeyska “Daily Star” ayaa wuxuu soo xigtay hadalada Paul Scholes kaddib wareysi uu bixiyay, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Haddii Manchester United ay la ciyaari lahayd koox ka fiican, ma aysan guuleysateen.”
“Waxaa jiray xoogaa walwal ah qeybtii hore, waxaa ka maqneyd isku xirnaan, taasina waxay ahayd calaamad walwal leh, ma u ciyaari karaan sidaan oo kale kulanka Liverpool? Marna maya, xitaa malaayiin sano.”
Manchester United ayaa iskeeni doonta kulanka Axada ee horyaalka Premier League, iyadoo fadhisa kaalinta lixaad isla markaana leh 14 dhibcood, kaddib markii ay badisay 4 kulan, 2 barbaro iyo 2 guuldarro, halka Liverpool ay ku jirto kaalinta labaad ee kala sareynta iyadoo leh 18 dhibcood kaddib markii ay badisay 5 kulan iyo 3 barbaro.